ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : April 2010
This is preview of 2010 Oscar nominee documentary. Which is based on the reality circumstances in Burma regarding the Saffron Revolution and narrative 1988 student revolution. The most interesting part is how did DVB (Democratic Voice of Burma)'s staff and undercover journalists try to get news and information within closed country (war zone) by risking their lives in addition, shooting video, speaking to media, sharingavideo or even taking photos or poccessing photos can go to the prison for long long time. Therefore I would humbly request to watch this film in order to understand our suffering Burmese people and help us for free from those nightmare.
Watch full video in this link http://www.channel4.com/programmes/burma-vj/4od
Posted by ရိုးရိုး at Friday, April 30, 20103comments Links to this post
Posted by ရိုးရိုး at Thursday, April 29, 20100comments Links to this post
Thein Sein, Prime Minister will participate in election
Myanmar's Prime Minister Thein Sein and several others ministers resigned from their military posts Monday so they can take part in the country's Election,
Release of Anger from Burmese People
Posted by ရိုးရိုး at Wednesday, April 28, 20100comments Links to this post
Posted by ရိုးရိုး at Tuesday, April 27, 20100comments Links to this post
မှတ်ဥာဏ်တွေ တဖြေးဖြေး လျှော့ လာခဲ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေး ခဏ ခဏ ဝင်ေ နမိတယ်။ ခုအသက်အရွယ် ရလာတဲ့အချိန်မှာ ပိုပို မေ့တတ်လာတယ်။ အပြင်ကိုသွားတိုင်း အိမ်ကနေမထွက်ခင် သော့၊ ဖုန်း၊ ငွေအကြွေထည့်တဲ့ အိပ်သေးသေးလေးရယ် နောက် အရေးကြီးတဲ့ train ticket, ID cards စတဲ့ ကာဒ်ပြားတွေ ထည့်တဲ့ ခေါက်အိပ်ပိစိလေးရယ် ကို သေချာရေပြီး စစ်မိတယ်။ ပါးစပ်ကပါ တစ်နှစ်သုံးလေး ဆိုပြီး ရေရွတ်ပြီး စစ် လိုက်ရမှ စိတ်က ကျေနပ်မိသလို ပါဘဲ။
စာထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာက ဦးနှောက်က ဆဲလ်တွေဟာ မိနစ်တိုင်း စက္ကန့် တိုင်း မှာ ပျက်စီးလိုက် အသစ်ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ ဆိုဘဲ။ အသက်ကြီးလာရင် ဆဲလ်တွေ ၊ ကလပ်စီးတွေ အသစ်တိုးတာထက် ပျက်တာက များများလာပါတယ်တဲ့ ။
တခါတလေလဲ မထင်ထားတာတွေ ပြန်ပြန် မှတ်မိနေတယ်။ အငယ်မ (တစ်ဦးတည်းသော ညီမ) နဲ့ အသက်ချင်း ၂နှစ် ကွာတယ်။ သူ့ ကိုမွေးတော့ ကျမ အသက် ၂နှစ်သမီးပေါ့။ သူ့ ကို အိမ်ကိုခေါ်လာတာ ကို အဲဒီအရွယ်ထဲက မှတ်မိတယ်။ အမေပိုက်ပွေ့ လာတဲ့ နီနီရဲရဲ ကလေးမ ပေါက်စကို လေ့လာစူးစမ်းစိတ်နဲ့ တချက်ကြည့်ပြီး တပြိုင်ထဲမှာဘဲ ငါကိုလူတွေ မချစ်ကြတော့ဘူး ဆိုပြီး အတွေးပေါက်တယ်။ ယုံကြည့်လိုက်ပါဦး .... အသက် ၂နှစ်သမီးထဲက ဒီလို ခံစားခဲ့ရဖူးတာကို ခုထိ မှတ်မိနေတယ်။ ငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့အိမ်အနေအထား၊ ထပ်ပြင်ဆောက်တဲ့ အိမ်အနေအထား အဲဒါတွေက အစ အကုန်မှတ်မိနေတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်း က စိတ်ရှုပ်ထွေး စရာ ကြုံခဲ့ရတာကတော့ ဓါတ်မှန် result ထဲမှာတွေ့ တဲ့ရင်ညွှန့် ရိုးနား က metal အစကိုပါ။ ဘာ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ ကလန့် ခံရှိနေတာလဲ။ ဒါဟာ ဘာ့ကြောင်ဖြစ်တာလဲ။ ဘယ်တုန်းကဖြစ်တာလဲ။ ဆိုတာ ဘယ်လို မှ အထပ်ထပ် စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ တခါတလေ ပြန်မှတ်မိမလားလို့တွေးကြည့် နေပေမဲ့ ဘယ်လို မှ မသိတော့ ။ အကန့် ဖျက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန် က MRI မလုပ်ရဘူး အန္တရာယ် ရှိတယ် လို့ဆေးမှတ်တမ်း စာအုပ်ထဲမှာ ရေးပေးထားတယ်။ အင်း ကြာတော့လဲ့ ပေလေယက်ကန် ထားလိုက်နိုင်ပါပြီ။
Demensia အဖြစ်များတဲ့ Age Group ထဲမှာလဲ မပါတော့ ဘာမှန်းကိုယ့် ကို ကိုယ်မသိဘူး။ စိတ်ဓါတ်ကျတာတို့ ဘာတို့ တော့ လောလောဆယ် မခံစားနေရပါဘူး။ သို့ သော် ခုတစ်လော ဝါဒီတွေ နည်းနည်းများပြီး ၊ လောကကြီးကို နည်းနည်း စိတ်ပျက်နေတယ်။
Posted by ရိုးရိုး at Wednesday, April 21, 2010 1 comments Links to this post
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, April 18, 20100comments Links to this post
ဒုတိယ blog မှ ဖတ်မိတဲ့ စိတ်ဝင်စား စရာ (Federal ပြည်ထောင်စု) အကြောင်းကို ကူးယူ မျှဝေလိုက်ပါတယ်
Federal Government ဆိုတာ အစိုးရ အဖွဲ့ ငယ် များ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ကြီးပါ ။ Federal Government မှာ ဗဟို အစိုးရ ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ နဲ့အခြားသော အစိုးရအဖွဲ့ ငယ်တွေ ပါဝင်ပါတယ် ။ ဖွဲ့ စည်း ပုံ ဟာ နိုင်ငံအလိုက် တစ်နိုင်ငံ နဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူကြဘူး ။ အခြေခံ တူညီတဲ့ Federal Government ဖွဲ့ စည်းပုံ တွေကတော့ ၊ နိုင်ငံ အတွင်းမှာ အစိုးရအဖွဲ့အဆင့်ဆင့် ရှိပြီး ၊ အဲဒီအစိုးရ အဖွဲ့ တွေဟာ အတူတကွ သော်၎င်း ၊ အာဏာခွဲဝေ၍ သော်၎င်း အုပ်ချုပ်ကြတယ် ။
ဗဟိုအစိုးရ မှာ တစ်နိုင်ငံ လုံး နှင့်ဆိုင်သော ဥပဒေ များ ထုတ်ပြန် ခွင့်ရှိတယ် ။ ဥပမာ -တစ်နိုင်ငံလုံး ကို ကိုယ်စား ပြုပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံ ရသော စစ်ရေး ၊ ကုန်သွယ်ရေး ၊ မဟာမိတ် နိုင်ငံဖွဲ့ ရေး ၊ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အစရှိတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကို ကိုယ်စားပြု တဲ့အချုပ်အခြာ အာဏာဟာ ဗဟို အစိုးရမှာပဲ ရှိတယ် ။
ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ တွေမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင် တဲ့ ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ခွင့် မရှိပေမဲ့ ၊ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြ ပိုင်ခွင့် ၊ ဆွေးနွေးခွင့် တွေရှိတယ် ။ အုပ်ချုပ်ရာ နယ်မြေ တွင်းမှာ သူ့ ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာ ဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ ကဲ့သို့တည်မြဲ ပြီး ၊ အခြားသော အစိုးရ အဖွဲ့ တွေက ၀င်ရောက် စွက်ဖက် ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး ။ ဗဟိုအစိုးရ ကထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပဲ ပြည်နယ်အစိုးရ တစ်ခုကထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေ ဟာ တစ်ခြား ပြည်နယ်တစ်ခု မှာ သက်ရောက် မှုမရှိဘူး ။
ဥပမာအနေနဲ့-
• ပညာရေးပိုင်းမှာ - ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ အထက်တန်း ကျောင်းသား များကို သိပ္ပံ / ၀ိဇ္ဇာ ကျောင်းသား လို့ခွဲခြား သတ်မှတ်ပြီး ၊ သိပ္ပံကျောင်းသားက ဘယ် ဘာသာရပ်တွေ ၊ ၀ိဇ္ဇာ ကျောင်းသား က ဘယ် ဘာသာ ရပ် တွေ ကိုသင်ကြား ရမယ်လို့ပုံသေ သတ်မှတ် ထားပေမဲ့ ၊ အခြား ပြည်နယ် တစ်ခုမှာ မြန်မာစာ ၊ အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့သချာင်္ ဘာသာရပ်များ ကသာ မသင်မနေရ ဘာသာရပ်တွေ ဖြစ်ပြီး အောင်မြင် ရမဲ့ဘာသာရပ် အရည်အတွက် ပြည့်အောင် ကျန်ရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေထဲက မိမိ စိတ်ကြိုက်ဘာသာရပ် တွေကို ရွေးချယ် သင်ယူ ပိုင်ခွင့်ရှိတာမျိုး
• ပြည်နယ်တွင်းဥပဒေပိုင်းမှာ - ပြည်နယ် တစ်ခုမှာ ယာဉ်စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ရင် ဒဏ်ငွေ ဘယ်လောက် ပေးဆောင်ရ မယ် လို့သတ်မှတ် ထားပေမဲ့ ၊ အခြားပြည်နယ် တစ်ခုမှာ ဒဏ်ငွေ အပြင် ထောင်ဒဏ်ကိုပါ ပူးတွဲ ကျခံ ရမယ်လို့သတ်မှတ် ထားတာမျိုး
• ပြည်နယ် တစ်ခုမှာ ရဲဝန်ထမ်း ၀တ်စုံကို အသား ရောင် လို့သတ်မှတ်ထား ပေမဲ့ ၊ အခြားပြည်နယ် တစ်ခုမှာ အပြာရောင် လို့သတ်မှတ်ထား တာမျိုး
• ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ကုန်ပစ္စည်းအချို့ ကို ( ဥပမာ-အချိုမှုန့်၊ ကျွဲရိုင်း ) တရားဝင် ရောင်းချခွင့် မရှိလို့သတ်မှတ်ထား ပေမဲ့ ၊ အခြား ပြည်နယ် တစ်ခုမှာ တရားဝင် ရောင်းချခွင့် ပြုထား တာမျိုး
ပြည်နယ် (သီးခြားအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေ) တစ်ခု နဲ့တစ်ခု ပြဋ္ဌာန်း ထားတဲ့ ဥပဒေ တွေကွဲ ပြားနိုင်တယ် ။ ပြည်နယ် အတွင်း နေထိုင် ကြတဲ့ ပြည်သူ တွေဟာ ကိုယ့်ပြည်နယ် အစိုးရကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခွင့် ရှိတယ် ။ ပြည်နယ်အစိုးရ လက်အောက်မှာ အခြား အစိုးရ အဖွဲ့ ငယ်တွေရှိတယ် ။ မြို့ တော်ဝန်တို့၊ ကျေးရွာ သူကြီး တို့ ဟာ ပြည်နယ် အစိုးရ လက်အောက်က အစိုးရအဖွဲ့ ငယ်တွေ ဖြစ်တယ် ။
ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဟာ အုပ်ချုပ်ရာ နယ်မြေ အတွင်းမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ကဲ့သို့တည်မြဲ တယ်ဆို ပေမဲ့ ၊ ပြည်နယ် အစိုးရတွေဟာ စစ်တပ်ဖွဲ့ စည်းပိုင်ခွင့် ၊ အခြားသော နိုင်ငံ များကို စစ်ကြေညာခွင့် ၊ အခြားသော နိုင်ငံများနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ ခွင့် ၊ ကုန်သွယ်ခွင့် စာချုပ် ချုပ်ဆို ခွင့် လိုမျိုး အချုပ်အခြာ အာဏာ တွေမှာ အကန့် အသတ် တွေရှိပါတယ် ။ ပြည်နယ် အစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ပေါ် မူတည်ပြီး တစ်နိုင်ငံ နဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူကြပါဘူး ။ အချို့ သော နိုင်ငံတွေမှာ ပြည်နယ် အစိုးရက ပြည်နယ်အတွင်း အခွန် အတိုး အလျှော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိ ပေမဲ့ ၊ အချို့ သော နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ပိုင် ခွင့် မရှိပါဘူး ။
အမေရိကန် နိုင်ငံဟာ ပထမဆုံး Federal Government စနစ်ကို စတင် ကျင့်သုံး ခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ၊ အင်္ဂလိပ် လက်အောက်က လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း ( ၁၇၈၁ ) က စပြီး Federalism ကို စတင်ကျင့် သုံးခဲ့တယ် ။ Wikipedia အရ လက်ရှိ Federal Government စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ -
• Argentina (23 provinces and 1 autonomous city)
• Australia (6 states and3territories)
• Austria (9 states)
• Belgium (3 regions and3linguistic communities)
• Bosnia and Herzegovina (Federation of Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska and Brčko District)
• Brazil (26 states and 1 federal district)
• Canada (10 provinces and3territories)
• Ethiopia (9 regions and3chartered cities)
• India (28 states and7union territories)
• Iraq (Currently 18 governates and 1 region)
• Malaysia (13 states and3federal territories)
• Mexico (31 states and 1 federal district)
• Micronesia (Chuuk, Kosrae, Pohnpei and Yap)
• Nigeria (36 states and 1 federal capital territory)
• Palau (16 states)
• Russia (46 oblasts, 21 republics,9krais,4autonomous okrugs,2federal cities, 1 autonomous oblast)
• United Arab Emirates (7 emirates)
• United States (50 states and 1 federal district)
• Venezuela (23 states, 1 capital district and 1 federal dependency)
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဟာလဲ တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်များနဲ့ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး ၊မြန်မာ နိုင်ငံမှာ Federal Government စနစ် တည်ထောင် နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သူ ဖြစ်တယ် ။
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေက ပြည်နယ် အတွင်း ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ် ခွင့်ရှိရမယ်လို့့ပြောရင် ၊ ပြည်ထောင်စု ကြီး မှ သီခြားနိုင်ငံ အဖြစ် ခွဲထွက်လိုသူဟုတလွဲ နားလည် သဘောပေါက် နေသူများ လည်းရှိတယ် ။ ပြည်နယ် များမှာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရှိရေး နဲ့သီခြား နိုင်ငံ အဖြစ် ခွဲထွက် တည်ထောင် ခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ် ချင်း လုံးဝ ကွဲလွဲ ပါတယ် ။
တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ပေါင်းစုံ စုပေါင်း နေထိုင် ကြတဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့့မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားများ အတူတကွ ချစ်ခင် ရင်းနှီး စွာနေထိုင် နိုင်ဖို့ နဲ့သက်တမ်း ကြာရှည်စွာ အဆုံးမသတ် နိုင်သေးတဲ့ ပြည်တွင်းစစ် တွေ ရပ်တန့် နိုင်ဖို့ အတွက် Federal ပြည်ထောင်စု စနစ်ဟာ တစ်ခုတည်း သော နည်းလမ်းသာ ဖြစ်တယ် ။ ။
ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံရေး သမားတစ်ဦး မဟုတ်သလို ဥပဒေ ရေးရာ များကို နားလည်သူလဲ မဟုတ်ပါ ။ ကျွန်တော် ဖတ်မိသော စာများအား နားလည်သမျှ နဲ့ဆက်စပ်တွေးမိသမျှ များကို ရေးသားထားခြင်းသာ ဖြစ်သည် ။
Posted by MTM at 10:48
Posted by ရိုးရိုး at Thursday, April 15, 20100comments Links to this post
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, April 11, 20100comments Links to this post
ဘန်ကောက်သတင်း။ (၁၀)ရက် ဧပြီ ၂၀၁၀ စနေနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တွင်း အဓိကရုဏ်း ၁၂ ဦး သေဆုံး
ထိုင်း နိုင်ငံ အစိုးရ နှင့် အတိုက်အခံ သက်ဆင် ထောက်ခံသူများ အကြား တင်းမာမှု များ ဆက်တိုက် ဖြစ်လာခဲ့ ရာ ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ထိုင်းအစိုးရစစ်တပ်မှ ရာဘာကျည်ဆံများ၊ မျက်ရည်ယိုဗုန်းများ ဖြင့် ဖြို ခွင်းရာ။ ဆန္ဒပြ အနီရောင်ဝတ်များမှ ပြန်လည် ခုခံ ကြ ရာ။ လူ ၁၂ဦး သေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါ သေဆုံးသူ ၁၂ ဦးတွင် စစ် သား ၃ဦး အပြင် အသက် ၄၃ နှစ်ရှိ ဂျပန် တီဗွီ ကင်မရာမန်း တဦး လည်းပါရှိသည်။ ၁၈နှစ်တာ ကာလအတွင်း ယမန်နေ့လူသေဆုံးမှု အပြင်းထန်ဆုံး အဆိုးရွားဆုံး နိုင်ငံရေး အုံကြွ ဆူပူမှု ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
အနီရောင် ဝတ် ဆန္ဒပြသူများ တပ်စွဲသည့် အစိုးရ အဆောက်အဦး နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး များရှိသည့် ဘန်ကောက် old quarter ရှိ Phan Fah တံတား နှင့် Rajdumnoen လမ်း အနီး တွင် လုံခြုံရေးစစ်သား နှင့် ရဲ ၆၄ ဦးအပါအဝင် အားလုံး ၅၂၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ကြောင်းသိရသည်။
လူဦးရေ ၁၅သန်းနေထိုင်တဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ ဟာ မသေချာတဲ့စိုးရိမ်တင်းမာမှုတွေ လွမ်းခြုံနေပြီး၊ ဆန္ဒပြသူများဟာ လမ်းပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့ တောင်းဆိုတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် Abhisit တိုင်းပြည်က ထွက်သွားဖို့ ကိစ္စ အရိပ်အယောင် မမြင်ရသေးပါတဲ့။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း တီဗွီ သတင်းများတွင် ဝန်ကြီးချုပ် Abhisit က သေဆုံးသူ မိသားစုများအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ စစ်တပ်မှာ ကျည်ဆန်ကို မိုးပေါ်ထောင်ဖေါက်ရန်သာ (လေထဲသို့ ဖောက်ရန်သာ၊ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်၊ ဆန္ဒပြများအား ခြောက်လှန့် ယုံ သာ) ခွင့်ပြု ထားပါကြောင်း တင်းထုတ်ပြန်သည်။
Posted by ရိုးရိုး at Friday, April 09, 20100comments Links to this post
Posted by ရိုးရိုး at Thursday, April 08, 20100comments Links to this post
I kept getting nasty head ache.
Working inastore for 14 hours during the day, 2hrs cleaning job at the office for night time. Killingarobot with work load. Yes ... you are right. Justin.
So I tried to have more rest, but the headache did not stop. It developed more and more. I felt dizzy and started vomiting. It felt numb like after anaesthetist injection.
My GP sent me to hospital for tests foraswollen liver. Then X – ray text.
It came back clear. Still something’s wrong. I was right.
Then at 10:20 am on July 09
“hi.... Eddy, are you wake up, sleeping - head?” you rang me. I tried to grab phone. The light from the window hit me and so it did stabbing, shooting pain. It felt like my head would explode. And I vomited too.
You drove3hrs from where you live and helped me out.
You assured me everything would be ok.
I believed you because you were my rock.
We’d meet nearly6years before asafriend. Some people think we’re couple because we always talk each other from A-Z. And once we worked together we shared one lunch box. Mostly you cooked and I helped you eat. I trusted you completely. So, if you said I’d be OK. I would be….
But in the next morning when I woke up, I felt like suffocated. I tried to open the window to get air. Once I tough the handle I black out. I lost contact with the world for few minutes.
I was rushed into theatre for an emergency treatment.
When came back, you were by my bedside.
Bless you, Eddy!!!
For two weeks, I could not eat and walk. But I battled back to health. Even came home. I had6months of strong antibiotic courses. I have lostalot of hair, been sick and weak.
But every step, you’re there every support you gave me.
You shaped my life as you designed my presentation.
You are my rock and my world. Therefore there is no way to let you go from my life.
Posted by ရိုးရိုး at Tuesday, April 06, 20100comments Links to this post
from : http://www.mindin.info/
” ဆရာရယ် ။ လူမမာကိုဆေးထိုးပြီး သတ်ပေးတဲ့ အဆက်အသွယ်များ ဆရာ့မှာ ရှိရင် ကျနော့်ကို ညွှန်ပေးပါ ။ ကျနော် ဒီဘဝနဲ့ လူလောကြီးမှာ မနေချင်တော့ပါဘူး ။ သားသမီးတွေလုပ်စာကလည်း ဆေးကုလို့ မလောက်။ သူတို့မှာ ရှိတဲ့ ရှိစုမဲ့စု ရွှေတိုရွှေစ ဆိုလို့ နားက နားကပ်တောင် မရှိတော့ပါဘူး ဆရာ ”
” ဒီလောက်ပူတဲ့ ရာသီမှာ ရေမသောက်ရဘူးဆိုတော့ ကျနော့်ဒုက္ခကို ကိုယ်ချင်းသာ စာကြည့်ပါတော့ဆရာ ။မနေနိုင်လွန်းလို့ ပါးစပ်ထဲ ရေထည့်ပြီး ပါးလုပ်ကျင်းသလို လုပ်တော့ ရေသောက်ချင်တဲ့ ဇောကပ်နေတာကြောင့် လည်ချောင်းထဲကို ရေနည်းနည်း တော့ဝင်သွားတာပေါ့ ဆရာ ၊ ပါးစပ်ထဲရေဝင်သွားတာနဲ့ ဗိုက်ကဖောင်းလာတော့တာပဲ ဆရာ“
“ဆေးကုဘို့ ငါးရက်ကိုတကြိမ် ဘတ်သုံးထောင်ဆိုတော့ ကျနော်လည်း မရှာနိုင် တော့ ပါဘူးဆရာ၊ အခုလည်း ဆရာတို့လို မိတ်ဆွေတချို့ က တလကို ဘတ်ငါးရာ တထောင် ဝိုင်းကူနေကြလို့သာ အသက်ဆက်နေရတာ၊ ကျနော်သေသွားတာက ပိုကောင်းမယ် ဆရာရယ် “
“ကျနော်အပြင်ကို မထွက်နိုင်တော့ဘူးဆရာ၊ ဟိုတနေ့က မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို စက်နှိုး ကြည့်တာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်က ကျနော်ပေါ်ပိကျလာလို့ ဘေးကလူတွေဝိုင်းဖယ်မှ ထနိုင်တော့တယ်ဆရာ။အခုတော့ အိမ်အပြင်မထွက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဆရာ၊ စကားပြော ဖော် မရှိတော့ ပိုပြီး ချောက်ခြားလာတယ်ဆရာ၊ လူ့လောက ကြီးမှာ ကျနော်မနေချင် တော့ပါဘူး“
ဘာကောင်မှ မဟုတ်သော ကျနော့်ကို တဆရာတည်း ဆရာ ၊ဆရာ ခေါ်ကာ သေချင် နေကြောင်း သူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မေးလေတိုင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တယ်လီ ဖုန်းမှတဆင့် ငြီးတွားနေသူကား ကျနော့် မိတ်ဆွေကြီး ကိုလင်းကြည်ဖြစ်ပါသည် ။သူကား ကျောက်ကပ်ဝေဒနာကို အပြင်းအထန်ခံ စားနေရသူဖြစ်ပါသည် ။ သူ့ဒုက္ခကား ကြီးလှ ချေ၏။
လတ်တလောအခြေအနေအရ ကျနော်နှင့် ဖူးခက်မြို့မှာ တမြို့တည်းသား ဖြစ်နေသော ကိုလင်းကြည်ကား အသက်ငါးဆယ်ကျော် မြန်မာလူမျိုး မော်လမြိုင် ကျောက်တန်း ဇာတိ
ဖြစ်သည်။ သူဖူးခက်ကို ရောက်နေခဲ့သည်မှာ ဆယ့်ခြောက်နှစ်ခန့်ရှိပြီ ။ သူကျန်းမာစဉ်က သော် ဖူးခက်မြို့မှ ထိုိင်းသူဌေးတယောက်၏ ရေခဲဆိုင်မှာ ရေခဲတင်ကားမောင်း သော အလုပ်ကို လုပ်သည်။ အရွယ်ရောက်သော သားတယောက်သမီးတယောက်နှင့်အတူ နေသည်။
သူသည် ဖူးခက်မြို့က တဦးတည်းသော ဘ်ိသိသ်ဆရာဖြစ်သည်။ ဖူးခက်မြို့မှာ ဖူးစာ ဆုံကြသော ချစ်သူမောင်မယ်ကိုးဆယ် ရာခိုင်နှုန်းသည် ကိုလင်းကြည်၏ ဘိသိသ် မင်္ဂလာဖြင့် အကြင်လင်မယားဘဝရောက်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြသည် ။ မင်္ဂလာပွဲနည်းပါးသော ဝါတွင်း ကာလများတွင် ဖူးခက်မှ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား စုံတွဲများခိုးရာလိုက်သံကြားပါက ကျနော်က ကိုလင်းကြည်ထံဖုန်းဆက်၍ “ ဘိသိသ်ဆရာကြီးကတော့ ပွဲမရှိတာနဲ့ ဂွင်ဖန်ပြန်ပြီထင်တယ်“ ဟု နောက်ပြောင်သည့်အခါ သူက ရယ်ကျဲကျဲလေသံဖြင့် “ ဟာ ဆရာတောင် ရိပ်မိနေပါပေါ့လား၊ အခုမှ သုံးတွဲပဲ ရှိပါသေးတယ် ဆရာရယ်၊ ဘယ်သူ့မှ မပြောပါနဲ့ ဆရာ ၊ မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကျရင် လက်ဖွဲ့လေးနဲ့လာခဲ့ပါ ၊ ကျနော့်ဧည့်ခံ ပါမယ်“ ဟု အရွှန်းပြန်ဖောက်တတ်သူဖြစ်သည်။
ကိုလင်းကြည်ကား လူပျော်ဖြစ်သည် ။လောကကြီးကို ပျော်ပျော်ရင်ဆိုင်ရဲသူဖြစ်သည် ။ ယခုသော်ကား သူရင်ဆိုင်နေရသော ရန်သူသေမင်းမှာ အားကြီးလှသည်ဖြစ်ရာ လောကကို ပျော်ပျော်ကြီး ရင်ဆိုင်နိုင်သော သတ္တိတို့ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ယောင်တကား ။
ကုန်သွယ်လယ်ယာဌာန ဝန်ထမ်းတဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရာမှ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကာလ၌် ဌာနပေါင်းစုံသပိတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့သဖြင့် နောက်ပိုင်း တွင်တာဝန်မှ ရပ်စဲ ခံခဲ့ရသည် ။
မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ရနောင်းဖက်သို့ ကူးလာကာ ကြုံရာကျပန်းအလုပ်တွေ လုပ်နေရာက ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ဖူးခက်သို့ရောက်လာသည် ။
သူနေကောင်းစဉ်ကသော် ဖူးခက်မြို့ရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အလုပ်သမားများ သာရေး နာရေး အသင်း (မြန်တိုင်း အသင်း)တွင် ကျနော် နှင့် တွဲလျက်နေ့ရောညပါ စည်းရုံး ရေးဆင်း ၊ သာမှုနာမှုတွေပါ အားကျိုးမာန်တက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသည် ။ ဖူးခက်မှ မြန်မာရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် မြန်တိုင်းဟူသော လစဉ်ထုတ်သတင်း စာတစောင်ကို လည်း သူနှင့်လက်တွဲထုတ်ဝေ ခဲ့ဘူးသည်။
အဖွဲ့အစည်း တခု တည်း တွင် အတူလုပ်ကိုင်ကြသူတို့ ထုံးစံအတိုင်း သူနှင့်ကျနော် အဖွဲ့ ရှေ့ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းကြခုန်ကြ ပြန်တည့်လိုက်ကြနှင့် ။ မြန်တိုင်းကို ထူထောင်ဖက်၊ ရန်ဖြစ်ဘက်ထဲတွင် မြန်တိုင်း အတွင်းရေးမှူး (ယခုချင်းမိုင်တွင်ရောက်နေသော၊ ဗကသ နိုင်ငံခြားရေးရာမှ) ကိုကျော်ဝင်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ဘူးသည်။ ၂၀၀၅ ဝန်းကျင်က မြန်တိုင်း ကို ဖူးခက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ အသင်းဝင် အင်အား သုံးထောင်နီးပါး ရှိခဲ့ဘူးသည်။ အသင်းဝင် တို့၏ လစဉ်ကြေြးုဖင့် ရပ်တည်ခဲ့သော မြန်တိုင်းမှာ တနှစ်ကျော်သာ သက်ဝင် လှုပ်ရှား နိုင်ခဲ့သည် ။ထို့အတူမြန်တိုင်းသတင်းစာလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရသည် ။
ကိုလင်းကြည် ကျောက်ကပ် ဝေဒနာကို ခံစားနေရသည်မှာ တနှစ်ကျော်ခန့် ရှိပြီ ။ ရောဂါစတင်ခံစား ရစဉ်က ဆီးက အဝါရောင်၊ ညိုညစ်ညစ် အရောင် ခပ်နောက်နောက် တွေပါလာရာက စသည် ။ဆေးရုံသွားပြတော့ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုစလုံး အလုပ်မလုပ် တော့ဟု ဆိုသည်။
ကျောက်ကပ်ကို ငါးရက်တကြိမ်ဆေးကြောနိုင်ရန် လည်ပင်းမှာ အပေါက်ဖောက်ထား ရသည် ။
သူ့အတွက် အကြီးဆုံးပြဿနာကား ငါးရက်တကြိမ် ကျောက်ကပ်ဆေးသည့် စက်ပေါ် တွင် ထိုင်ကာ ကျောက်ကပ်ဆေးရခြင်းပေတည်း။
ထိုသို့ကျောက်ကပ်တကြိမ် ဆေးကြောရခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေကား တကြိမ်လျှင် ထိုင်း ဘတ် သုံးထောင်ဖြစ်၍ တလခြောက်ကြိမ် ဆေးရသည်ဖြစ်ရာ တလအတွက် သွေးသန့်စင် စားရ်ိတ်မှာ ထိုင်းဘတ် တစ်သောင်းရှစ်ထောင်(မြန်မာကျပ်ငွေ ငါးသိန်း ခန့်) ဖြစ်လေရာ ကိုလင်းကြည် တယောက် အချိန်ကြာလေ မျက်ဖြူဆိုက်လေဖြစ်ရတော့သည် ။
သူ့ဒုက္ခကားငွေကုန်ရုံနှင့် ဆုံးခန်းမတိုင်သေးချေ ။ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ရေမသောက် ရ ။ ဆန်ပြုတ်မသောက်ရ ။အရည်ရွှမ်းသော အသီးမစားရ ။ ဆီးပေါက် ပိတ်နေပြီ ။ လုံးဝ ဆီးမသွားတော့။ ဝမ်းသွား လျှင် ကလေးမီးဖွားသလို ဒုက္ခကြီးစွာ ခံစားနေရသည်ဟု ဆို သည်။ လှဲအိပ်၍မရ ထိုင်လျက်ပင် အိပ်စက်ရသည်။
လှဲအိပ်လိုက်လျှင် ခန္ဓာကိုယ့်အနှံ့တွင် စီးဆင်းနေသည့် သွေးတွေက ခေါင်းကို စုရောက် လာသလို ခံစားရပြီး ချက်ချင်း အသက်ထွက်သွားမည်ထင်ရအောင် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား နေသည်ဆို၏။ ဟိုစဉ်က အလုပ်နားရက်များတွင် မော်တော် ဆိုင်ကယ် တစီးနှင့် ဖူးခက် မြို့အနှံ့ မွန်မြန်မာအလုပ်သမား တို့၏ သာမှုနာမှု အလို့ငှာ တနေကုန်ခရီးနှင်နေတတ် သော ကိုလင်းကြည် တယောက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပင် စက်မနိုးနိုင်တော့ ။နေအိမ် ကျဉ်းကျဉ်းကလေးထဲမှာပင် ဘဝ၏ နောက်ဆုံးအချိန်ကို စောင့်မျှော် နေရချေသည် ။ ကိုလင်းကြည်၏ အသက်ကို အနည်းငယ် ဆွဲုဆန့်နိုင်မည့် နည်းလမ်းဖြစ်သော ဆီးသွား နိုင်မည့် အပေါက်ဖောက်မည် ဆိုပါကလည်း ကုန်ကျမည့် ငွေပမာဏက မသေးလှ။ ထိုင်းဘတ် ငါးသောင်းမှတသိန်းဝန်းကျင် ကုန်ကျနိုင်မည် ဆိုပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်ထိုင်းဘတ် (၃၀ )သွင်းကာမျှဖြင့် အစိုးရဆေးရုံများတွင် ဆေးဝါးကုသနိုင်သည် ဆိုသော်ငြား အမှန်စင်စစ် သာမန် အာဂန္တု ဖျားနာရောဂါများ အတွက်သာဖြစ်၍ ကိုလင်းကြည်ကဲ့သို့ နာတာရှည်ဝေဒနာရှင်များ အတွက်ကား အကျုံးမဝင်သည်ကား မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင် ။ကျောက်ကပ်ဆေးသည့် စက် က ဖူးခက်က ထိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ မရှိဟုဆိုလေသောကြောင့် ဖူးခက်ရှိ ဘန်ကောက် ဆေးရုံမှာ ငွေပေးနိုင်မှ ဆေးခွင့် ရသည် ။
ကျနော်တို့က ထိုင်းလူမှုဖူလုံရေးမှာ မှတ်ပုံတင်ထားလျှင် ဆေးကုသခ တဝက်ခန့် သက်သာမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပေးကြသော်လည်း ယာယီပတ်စပို့တွင် အလုပ်ရှင် အမည်ခံထားသော ထိုင်းသူဌေးက လုပ်မပေးနိုင်ဆိုသောကြောင့် သူ့မှာ မနိုင်ဝန်ဖြင့် ရှေ့ခရီးဆက်နေ ရရှာသည် ။
အမှန်ကိုဆိုရသော် ယခုတလော ကျနော်စာရေးချင်စိတ်ကုန်ခန်းနေကြောင်း ဝန်ခံလိုပါ သည်။ သို့သော်ကျနော့် စာတကြောင်း စာတပိုဒ် ကြောင့် စေတနာရှင်များပေါ်လာခဲ့သော် ကိုလင်း ကြည် တယောက် လူ့ လောကတွင် တရက်တမနက် အသက်ဆက်လက် ရှင်သန် ခွင့် ရနေ ဦး မည်ဖြစ်ရာ စာဖတ် ပရိသတ်များထဲမှ သူတပါးဒုက္ခကို သုခဖြင့် အစားထိုး လို သူစေတနာ ရှင်တဦးတလေပေါ် လာလို ပေါ်လာ ငြား ဤစာစုကို ကျနော်ရေးပါသည်။
အကယ်တန္တိ စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် ငွေအားဖြင့်မကူညီနိုင်သည့်တိုင် သေမင်းနှင့် အချိန်ပြည့်စစ်ခင်းနေရသူ ကိုလင်းကြည်အား နေ့လည်နေ့ခင်း အထီးကျန် အားငယ် နေချိန်တွင် ဖုန်းနံပတ် ( +၆၆(၀)၀၈၄၈ ၄၅၇၂ ၅၂) သို့ ဆက်သွုယ်၍ အားပေး နှစ်သိမ့် ကြစေလို ပါသည် ။
Posted by ရိုးရိုး at Monday, April 05, 20100comments Links to this post
Posted by ရိုးရိုး at Thursday, April 01, 20100comments Links to this post